Developers bụ idé nke ihe ọ bụla nzukọ na mgbe ọ na-abịa a ụlọ ọrụ dị ka Spotify nke kwesịrị mgbe nile web ọnụnọ mgbe ahụ mkpa nke na mmepe na-dị oké mkpa karịa mgbe ọ bụla na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na mmepe na nke a na-ahụ na ndị kasị mma na ala nke nkà ụlọ ọrụ na-nyere ka ọrụ nke mere na ha na-ụlọ ọrụ na-n'elu. Ọ bụ irè nke mmepe meworo ka n'aka na Spotify ngwa, extensions na mobile metụtara stof na-mepụtara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ụlọ ọrụ na-nyere ka onye ọrụ.
Part1. Gịnị bụ API ihe na ihe Spotify API?
Part2.What nwere ike Spotify Mmepụta-enweta site na Spotify API?
Part3. Reference maka Spotify API
1.What si API ihe na ihe Spotify API?
API ma ọ bụ ngwa mmemme interface bụ a iwu akara interface na-enye ohere mmepe ịrụ niile nzuzo na yiri stof iji jide n'aka na ngwa na-mepụtara na ihe kasị mma n'ụzọ. Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe stof na e mepụtara na ụwa nke mmepe na ọ na-arụ ọrụ dị ka kwa usoro dị ka n'okpuru:
Na otu na-arụzi ụgbọala Spotify nwekwara mepụtara ngwa mmemme interface iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ-nyere mmepe ndị kwesịrị ịzụlite omume na yiri ngwa. The interface na yiri nzuzo dị mfe ịghọta na ọbụna ma ọ bụrụ na a Mmepụta bụ novice mgbe ahụ ọbụna nke ga-egbo n'ime otu ọnwa na ala na afọ ojuju. The interface bụ ihe na e ẹwụtde ke ọgụgụ n'okpuru:
Na nke kacha mma uru ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa otu nke kasị mma ụzọ mee ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma echiche nke ngwa na e mepụtara dị ka ndị ọrụ na-mgbe dọtara kwupụta ngwa na ndị dị mfe iji na-enwe. N'otu ụzọ ahụ Spotify nyerela ya niile mmepe iji jide n'aka na ngwa na-mepụtara bụ ndị na-ala nke nkà na rata onye ọrụ n'ime azụmahịa.
2.What nwere ike Spotify Mmepụta-enweta site na Spotify API?
E nwere ogologo ndepụta nke ụlọ ọrụ na a Mmepụta nwere ike inwe si Spotify API na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na zuru ndepụta nwere ike anya na URL https://developer.spotify.com/web-api / iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ndị na-enyoba dị ka a na peeji nke ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nkọwa enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị elu ọrụ na onye ọrụ nwere ike inwe ndị dị ka ndị:
Web API nkuzi
Echo akwu atụ ngwa
Ndị a ga-kọwara otu otu na zuru ezu
• Web API nkuzi
N'ihi na ọ bụla ọhụrụ Mmepụta ọ bụ amanyere bụ iwu na-eme ka n'aka na web API nkuzi na-ebugharị na isi SDLC na ngwa eruba na-atụle ma ghọta n'ụzọ zuru ezu. The screenshot n'okpuru na-egosi isi web API nkuzi maka ngwa Mmepe nke Spotify
Na a ngwa nile bụ isi ozi akaụntụ nke onye ọrụ na-kwajuru iji jide n'aka na ha ga-esi kasị mma na ndị ọkaibe echiche mgbe ha na nbanye profaịlụ iji jide n'aka na ozi profaịlụ na n'elu:
• Ihe Nlereanya ngwa
Iji jide n'aka na ngwa na-metụtara nke atọ ọzọ na nke nwekwara jikọọ Spotify n'elu ikpo okwu ha na-mepụtara na nke a na ngalaba nke Spotify mmepe jide n'aka na ọrụ a rụrụ na nke kacha mma n'ụzọ.
• Echo akwu atụ ngwa
N'okpuru a usoro mmepe nke Spotify na ikwughachi akwu esonyela aka iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe functionalities na-nyere ka ọrụ nakwa dị ka artists-achọ ime ka n'aka na songs na-nụrụ na uploaded-enweghị ọ bụla nke na nsogbu. The n'okpuru kwuru bụ genre nchọgharị na bụ ihe atụ na nke a ma ọ bụ otu nke yiri ngwa:
3.Reference maka Spotify API
Anọ ngalaba nke Web API Mbugharị, Iji scopes, Web API ikike ndu na ọgwụgwụ mgbe akwụkwọ na ikwu na web API-atụle n'isiokwu na n'okpuru ngalaba nke akwụkwọ na nke a. Nwoke URL si na-zuru ezu ọmụma ndị dị ka ndị:
Onye ọrụ nwere ike ịga na njikọ na e kwuru n'elu na-eme ka n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma pụta na-emecha na ụlọ ọrụ zuru. Ọ bụ ya mere dụrụ niile Mmepe ka jide n'aka na akwụkwọ na-ekwu na-soro na-etinyere m ihe kasị mma n'ụzọ:
• Web API Mbugharị
Ọ na-eme n'aka na onye ọrụ data na-ikike ozugbo ha na-ite n'ime Spotify akaụntụ na na nke a ọtụtụ ikike na Nyocha nzọụkwụ na-fesa nile usoro. Iji jide n'aka na usoro a ghọtara na-esonụ bụ arịrịọ pụta na ikwu na doro nke:
• Iji scopes
Ọ bụkwa otu n'ime ebe nke ikike ndị ahịa data na nke abụọ larịị iji hụ na ọkaibe ụlọ ọrụ na mmekọrita nche na-etinyere na onye ọrụ ego n'anya kwukwara nche dị ka mma. Na-esonụ larịị koodu na na metụtara pụta na ụdị nke larịị ngwa interface nwere ike hụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ n'okpuru:
• Web API ikike
A nzọụkwụ onye ọrụ na-eme ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ na-nyere na ọrụ site ikwe ka ọ na iji nweta ndị rịọrọ data na ala na afọ ojuju. Koodu eruba bụ dị ka n'okpuru:
• Ọgwụgwụ ebe ikike
Ọ bụ ndepụta nke iwu na-eji jide n'aka na data na-Ewepụtara n'ihi na onye ọrụ na nke kacha mma n'ụzọ dị ka ndepụta nke iwu. The sample koodu bụ ka ndị a:
Ụzọ na-Buru Touch na Spotify gụgharia
> Resource> Spotify> Ihe Ọmụma nke Spotify API maka Spotify Mmepụta